Ọkachamara n'ichepụta Linear Lighting -webụsaịtị webụsaịtị Luxury bidoro n'ihu ọha.
Malite na Ọgọstụ 9, ị nwere ike nweta nkwado azụmahịa na ọkụ okomoko site na ịga na www.luxury-light.com. E hibere okomoko na 2011, na -elekwasị anya na arịa ụlọ dị mma nke nwere ọkụ ọkụ mpaghara, ọkụ kwụpụtara onwe ya dabara adaba maka ụdị ngwa dị iche iche, ọ ga -abịa ...
Uru iri nke ọkụ ọkụ6-10
Uru isii, ụdị ngwa dị obosara N'ihi ịdị kọmpị ya, mgbawa ọkụ nke otu ọ bụla bụ 3 ~ 5mm square ma ọ bụ okirikiri, yabụ ọ dabara adaba maka ịkwadebe ngwaọrụ nwere usoro ịme ihe mgbagwoju anya. Dịka ọmụmaatụ, nrụpụta ọkpọ na-adị nro, bendable, ibe ọkụ, na ọkụ nwere ụdị pụrụ iche, naanị ugbu a ...
Uru iri nke ọkụ LED1-5
Uru otu. Ahụ ọkụ dị obere ọkụ ọkụ LED bụ obere, ọmarịcha mgbawa LED nke agbakwunyere na resin epoxy transperent, yabụ na ọ pere mpe, dị oke ọkụ, ọ nwere ike ịchekwa ọtụtụ ihe na oghere na mmepụta na ngwa. Uru abụọ, oriri ike dị ala Onye na -arụ ọrụ ...